6 -da cayaar ee kubbadda pinball -ka ugu fiican Android | Androidsis
Nerea Pereira | 08/08/2021 13:42 | Codsiyada Android
Ciyaaraha madadaalada ayaa had iyo jeer jeclaa qof walba, xitaa maanta waxaa suurtogal ah in lagu arko qaar ka mid ah mishiinnadan meel ay saacaduhu ku duuleen. Iyada oo kaliya hal qadaadiic, saacado madadaalo ah ayaa la dammaanad qaaday. Oo haddii aad ka tirsan tahay jiilkii ku noolaa waqtiyadan, sida haddii aad ka tirsan tahay jiilka aan garanayn mashiinnadaas, maanta waxaa suurtogal ah in sidaas lagu sameeyo ciyaaraha fiidiyowga. Haa waxaa jira dhowr ciyaaraha pinball for android taasi waxay kugu kalifaysaa inaad jacayl gasho.
Pinball waa ciyaar aad u fudud halkaas oo ay tahay inaan helno dhibcaha ugu fiican oo bixiya madadaalo dammaanad leh. Ciyaaraha fiidiyaha ayaa sii fiicnaanaya oo ka sii fiicnaanaya ilaa maanta waxaan helnaa qaar aad u xiiso badan.
1 Aruurinta cayaaraha pinball -ka ugu fiican ee loogu talagalay Android
1.2 Pinball Deluxe: Dib ayaa loosoojiyay
1.3 Kubbadda cagta pro
1.5 Kubbadda Zaccaria
1.6 burburin Hit
Aruurinta cayaaraha pinball -ka ugu fiican ee loogu talagalay Android
Taasina waa sababta aan maanta kuugu soo qaadaneyno liisaska cayaaraha pinball -ka ugu fiican haddii aad rabto inaad ku raaxaysato ciyaarta caadiga ah ee had iyo jeer la casriyeeyo. Waxaad arki doontaa cinwaano nooc kasta leh oo aad si fiican uga faa'iidaysan karto taleefankaaga ama kiniinigaaga intaad ku raaxaysato Ciyaaraha pinball -ka ugu fiican ee loogu talagalay Android.
Waxaan siineynaa qorigayaga bilowga ah ururinta cayaaraha pinball -ka, markan aad cclassic ah qaabkiisa iyo miisas kuwaas oo daryeela dhammaan faahfaahinta oo runtii soo jiidasho leh. Afar miis ayaa la heli karaa, dhammaantoodna leh tafaasiil sare iyo ciyaaro ay weheliyaan caqabado iyo caqabado kaa dhigi doona inaad ku raaxaysato ciyaarta noocan ah si buuxda.
Dhammaan miisaska waxaa ku jira Sawirro 3D Pinball ah oo leh magacyo madadaalo leh sida Burcad -badeed, Barafoobay, Gabar sixir ah iyo bar West oo kaa dhigi doonta inaad dareento inaad ku ciyaareyso miis dhab ah.
Developer: Ciyaaraha Mouse
Pinball Deluxe: Dib ayaa loosoojiyay
Haddana waxaan u gudbeynaa ciyaar kale oo ilaalinaysa bilicda -dhaqanka iyo ciyaar -ciyaar caadi ah oo shaki la'aan noqon doonta mid aad u madadaalo badan. Kuwa jecel jaceylkaan caadiga ah shaki la'aan waa ikhtiyaar wanaagsan, oo leh in kabadan 50 heerar oo ay tahay inaad ka gudubto si aad u hesho saacado iyo saacado madadaalo oo dammaanad leh.
Markaad heerarka marayso dhibku sidoo kale wuu kordhayaa oo xitaa waad kari kartaa furo minigames haddii ay dhacdo in aysan kugu filnayn ilaa hadda. Waa ciyaar bilaash ah, in kasta oo leh xayeysiis marmar ah iyo ikhtiyaarka ah in lagu iibsado hagaajin lacag dhab ah.
The hab kubadaha super in ka badan toban miis oo kala duwan oo leh mowduucyo aad u kala duwan sida miiska "Space Frontier" oo leh sawirrada galaxyada, ama miiska "Wild West" ee Galbeedka Fog. Ama sidoo kale miiska «Bagaball» oo ku xusuusin doona qadiimiga weyn.
Developer: Ka samaysan Xirmooyin
Kubbadda cagta pro
Waxaan sii wadnaa mid ka mid ah kuwa ugu caansan cinwaankan, kaas oo kuu oggolaan doona baro xirfadahaaga ama taa lidkeeda laguma goyn. Waxaad ku soo dejisan kartaa taleefankaaga casriga ah oo waxaad ku raaxeysan kartaa qarnigan in ka badan toban xaaladood oo kala duwan.
Waa run in aad xor tahay waxaad heli doontaa xayeysiis aad loo buunbuuniyo mar kasta oo aad ciyaarta dhamayso. Laakiin si kastaba ha ahaatee Wali waa cinwaan aad u qiimo badan oo loogu talagalay darbooyinka birta ah ee cajiibka ah iyo faahfaahin aad u macquul ah oo aad u horumarsan iyo sawirro.
Si aad u bilawdo ciyaarta, marka hore waa inaad riixdaa badhanka si aad kubbadda u tuurto, u qabo labada dhinac ee shaashadda si aad u xakamayso isku -xidhka oo aad kubbadaha u bilowdo adigoon joojin. Waxaa jira saddex miis oo kala duwan oo leh mawduucyo kala duwan. Ciyaarta waxaa si fiican u weheliya muusig iyo saamayn dhawaaq oo ku raaci doona saacadaha ciyaarta.
Ciyaartan kale ayaa kuu oggolaan doonta inaad sidoo kale ku raaxaysato Classics -ka weyn maadaama miisaskeeda lagu dhigay cinwaannada caanka ah sida Marvel Comics, Star Wars, ALIEN, Dhintay Socodka iyo qaar kaloo badan. Sidan ayaad ku heli doontaa ciyaaro badan oo pinball ah oo madadaalo leh.
Zen Studios waxay u keentaa cinwaankan xiisaha leh miisaskeeda kala duwan, kuwa gaarka ah iyo kuwa asalka ah oo aan lahayn faahfaahin marka lagu daro qaar Sawirada 3D kuwaas oo daweeya xaqiiqo aad u fiiqan oo taxaddar leh.
Waxaad u ciyaari kartaa cinwaankan shaqsi ahaan iyo gudaha labadaba multiplayer hotseat aaladdaada Android si aad u ciyaarto mid ka mid ah cayaaraha ugu madadaalada badan ee qadiimiga ah oo xusuusinaya muuqaalka dhabta ah ee kubbadaha iyo miisaska oo ay weheliso taabashada casriga ah. Maxaad kaloo weydiin kartaa!
Developer: Istuudiyaha Zen
Waxaan sii wadaynaa ururintaan ciyaar kale oo pinball ah oo loogu talagalay Android taasi waxay u taagan tahay xaqiiqada ay miiska soo bandhigeen. Haddii aad rabto inaad si faahfaahsan u ilaaliso miisaska, waxaad geli kartaa habka loo yaqaan "Fly" taasna maahan inaad ciyaarto. Adigoo adeegsanaya zoom -ka waxaad si faahfaahsan u arki kartaa dhammaan walxaha miisaska. Shaki la'aan, ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay dadka jecel kubbadda koleyga tan iyo weligeedba.
Shaki la'aan waa ciyaar aad u macquul ah oo xusuusinaysa waayo -aragnimada ku ciyaarista mashiinadan nolosha dhabta ah. Kaliya waa inaad soo dejisaa si aad u bilowdo u ciyaarida moodooyinka kala duwan iyo qadiimiga ah ee ciyaartan caadiga ah ay soo bandhigto, in kasta oo dhinaca taban ay tahay in badankood la bixiyo laakiin mararka qaarkood waxaad heli kartaa dalabyo wanaagsan.
Developer: Sixirka Pixel KFT.
Waan sii wadaynaa ciyaartan taas waxaa loo tixgelin karaa waqtiga ugu fiican maaddaama cinwaankan aad ka heli karto wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u noqoto mid leh dheelitirka ugu fiican, bilicsanaanta iyo garaafyada dhammaan.
Markaad bilowdo ciyaarta waxaad ka soo muuqan doontaa cabbir qarsoodi ah halkaas oo ay tahay inaad kubbada ku dhufato adigoo ku riixaya dhinacyada shaashadda markaad fursad u hesho. Waayo -aragnimada ciyaarta ayaa ka sii fiicnaanaysa oo ka sii fiicnaan doonta muusigga soo jiidashada leh iyo laxanka frenetic -ka marka aad burburiso wax kasta oo aad hesho.
Ku ciyaarida cinwaankan waxay qaadan doontaa saacado halka Waxaad ka gudubtay in ka badan 50 heerar oo kala duwan oo aad ku raaxeysan karto qaababka iyo siyaabaha lagu burburin karo adduunyo karis ah.
Sida laga yaabo inaad aragtay, ma waayi doontid xulashooyin dhab ah markay tahay inaad ku raaxaysato Ciyaaraha pinball -ka ugu fiican ee loogu talagalay Android. Sidaa darteed ha ka waaban inaad tijaabiso xulashadayada gaarka ah!
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 6-ta kulan ee ugu fiican pinball-ka Android